Isiseko esiluhlaza lithuba elibalulekileyo lokuphucula ukukhula kweshishini leziseko
Kwiminyaka yakutshanje, "ukuphosa okuluhlaza" kubethelelwe nzulu kushishino, kwaye ngenxa yezizukulwana ezizayo, kufanele ukuba sibe neentaba eziluhlaza kunye nemilambo. Kule mihla, indlela ethandwa ngayo "luhlaza" kwiziseko zasekhaya, kwaye yeyiphi eyona nto ibalulekileyo ekwakheni ...
Imiba efuna ingqwalaselo ekuqhubeni ukwenziwa kwemikhono yangaphakathi
Xa kusetyenzwa umkhono wangaphakathi, imigaqo kunye neemfuno zomphetho we-groove, ukugaya umphezulu, kunye nokuguba okuhle komdyarho kufana nqwa nomkhono wangaphandle. Emva kokuba umphezulu womsesane wangaphakathi ungumhlaba, ukuqhubekeka kwangaphakathi nobubanzi bangaphandle kwenziwa ...
Umshini wokwenza i-Metal ovelisa
Kulo nyaka, ishishini ukulahla shaft liphuhlise kakuhle. Ngophuhliso olomeleleyo lweemoto, ukuhamba ngenqwelomoya, ezonyango kunye namanye amashishini, ibonelele ngeqonga elibanzi lophuhliso kwishishini lokuphosa oomatshini basekhaya. Imveliso yokuphosa oomatshini iqhubela phambili ngokuthe ngcembe ...
Indlela yokwenza ulondolozo rhoqo iibheringi eqengqelekayo emva kofakelo
Ngokwedatha efanelekileyo, umonakalo ngexesha lofakelo lwee-akhawunti ezingena-20% zomonakalo wokuthwala. Unganciphisa njani umonakalo ngexesha lokufakwa kwebheringi? Oku kulandelayo yintshayelelo eneenkcukacha kwiimfuno ezithile zesiza xa kufakwa ...
Iibheringi ezichanekileyo ziye zaba lishishini eliphambili lophuhliso kwisicwangciso seshumi elinambini seminyaka emihlanu
Ukuthwala licandelo elilungisa kwaye linciphise ukungavumelani komthwalo ngexesha lokuhambisa ngoomatshini. Xa ezinye iinxalenye zihamba zihambelana kwesinye nesinye, isetyenziselwa ukunciphisa ukungqubana kokungqubana ngexesha lokuhambisa amandla kunye nokugcina indawo ye-shaft ...
Indlela yokukhetha uhlobo lokuthwala
Kukho iintshayelelo ezinxulumene nendlela yokukhetha uphawu kunye nohlobo lweebheringi. Nangona kunjalo, ukuqonda okuthe ngqo malunga neebheringi ezicalucaluliyo, okanye zihlala zihoywa okanye zingakhathalelwanga, zihlala zidlala indima ebaluleke kakhulu ekusebenziseni iibheringi. Makhe ndikuncede kwisayensi edumileyo. 1. Buyintoni ubomi ...
Iibheringi ezijikelezayo ezinzima, Gcwalisa ngokupheleleyo iibheringi zebhola, Pin mqengqeleki iibheringi, Ukucwangciswa kweTaper Roller, Self-Aligning Ball Ukunikela, Inch eyodwa Umqolo,